Indlela Yokuthuthukisa - Sichuan Shuer Medical Devices Co, Ltd.
Ngo-2007, izinkampani zokuqala zokusungula
IShaoxing yeying fanghua co.,LTD yasungulwa!Ekuqaleni kokusungulwa, isu lentuthuko lentuthuko ezimele kanye nokusungulwa kwemikhiqizo kazwelonke.
Ngo-2010, imboni yangena
ngonyaka wokuthuthuka ngokushesha, imboni yanwetshwa futhi isikali sanwetshwa.
I-Shaoxing Juneng New Material Technology Co.LTD.yasungulwa, futhi okunye ukucutshungulwa kwangaphandle kwaguqulwa kwaba ucwaningo oluzimele nokukhiqiza ukuthuthukiswa, futhi kwathuthukiswa ibhizinisi lokuthekelisa, laba isizinda sokuzijwayeza senyuvesi yase-shaoxing.
Ngo-2017, uqede impumelelo ethile
I-Sichuan juneng filter co.ltd—inkathi entsha, ukucabanga okusha kanye nesiqalo esisha, sephule amaningiNo.1, futhi sibe ngabanye babakhiqizi abahamba phambili balokhu okufayiliwe.futhi inkampani yethu iqhubekela phambili ku-lPO cishe.
Ngo-2018, ukuthuthukiswa okuqhubekayo
Baqashelwa uShifeng, Youbang, Guijun, Tai Ji, Xinxiwang nezinye izinkampani, sebengabalingani bethu besikhathi eside futhi basungula isikhundla sethu esiphambili ezintweni zokuhlunga ezincibilikayo.
Ngo-2020, Dlula ngekusasa
Sesibe umphakeli oqokiwe wamayunithi ahlobene nemishini yezokwelapha, futhi sifakwe ohlwini lwezinto ezibalulekile kazwelonke zokuvikela ubhubhane oluqinisekisa amabhizinisi, okuholela embonini yezindwangu encibilikile.
Imikhiqizo Eshisayo - Imephu yesayithi - I-AMP Mobile Imaski yaseChina, I-China Protective Mask, Imaski yobuso, I-Pharmacy Surgical Mask, I-PPE Mask, I-FFP2 Respirator,